Muran u dhaxeeya Punland iyo Galmudug oo cirka isku shareeray (Maxaa la isku hayaa?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muran u dhaxeeya Punland iyo Galmudug oo cirka isku shareeray (Maxaa la isku hayaa?)
22nd September 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa warqad uu uga cabanayo maamulka deriska la ah ee Puntland u diray madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka.
Madaxweyne Cabdi Qeybdiid oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay inuu maamulka Puntland xayiraad ku soo rogay garoon diyaaradeed oo cusub oo dhowaan Galmudug ay ka sameysatay koonfurta Gaalkacyo.
Qeybdiid ayaa sheegay inay dowladda ka codsadeen inay muddo saddex maalmood gudahood jawaab ka bixiso xayiraadda lagu soo rogay garoonkooda.
Wuxuu sheegay in dadka Galmudug aanayn aqbali doonin inuu sii xirnaado garoonkooda, wuxuuna ku hanjabay in dad reer Galmudug ay tashan doonaan hadii muddo 3 maalmood ah wax looga qaban waayo xariyaadda garoonka ay dhisteen.
Cabdi Qeybiid ayaa sidoo kale sheegay in maamulka Puntland u digay diyaarado doonayey iney ka degaan garoonka maamulka iyo deegaanka Galmudug ka dhiseen Koonfurta Gaalkacyo, wuxuuna sheegay in xitaas isagu uu Muqdisho ugu xayiran yahay diyaarad la’aan.
Qeybdiid ayaa ku doodaya in garoonka diyaaradaha Gaalkacyo ee hadda shaqeeya oo ah kii ay dhisatay dowladdii Soomaaliya, ayana gaacanta ku hayaan maamulka Puntland uu leeyahay dhibaatooyin amaan.
Dhanka kale, Maamulka Puntland ayaa ka jawaabay eedeynta Galmudug, wxeyna dhankooda ku doodeen in Maamulka Galmudug doonayo inuu hub kala soo dego garoonka diyaaradeed ee u ka sameystay koonfurta Gaalkacyo.
C/naasir Bedel Khalaf oo ah Mas’uulka u qaabilsan wasaarada Warfaafinta Puntland ee Gobolka Mudug ayaa sheegay inay ka war heleen hub laga soo rarayo garoomo ku yaal Koofurta Muqdisho la doonayo in laga soo dejiyo deegaanada Mudug oo uu sheegay inay Puntland maamusho.
“Arrinta Madaxweynaha Galmudug ka hadlay ee Air Porka Galkacyo in loo diiday iyo in garoon kale oo ay Galmudug leedahay ayaan rabaa inaan cadeyno, Cabdi Qeybdiid waligiis Galkacyo wuu ka soo deji jiray waa nin mas’uul ah oo deris aan nahay, laakiin ujeedo siyaasadeed ayuu ka leeyahay arrintaas, Garoonka ay sameysteen waxaa la doonayaa in Hub Muqdisho laga soo raro in laga soo dejiyo”ayuu yiri C/naasir Bedel Khaliif oo la hadlay Idaacada BBC-da.
Waxaa uu sheegay in aysan iyagan diidaneyn inuu Galkacyo yimaado, hase ahaatee ay ka soo horjeedaan hub sharci daro ah oo la doonayo in laga soo dejiyo garoonkaas, waxaana uu intaa ku daray in Puntland uu mamnuuc ka yahay in hub sharci daro ah la soo geliyo sida uu yiri.
“Dowladda Puntland wax aysan ogeyn Gobolka Mudug kama soo degi karo, Mudugna Puntland ayay hoos-tagtaa, waxaa rabaa inaan cadeyno in Galmudug ay sameysatay garoomo qarsoodi ah oo ay rabto inay hub ka soo degsto, midaas baa diidanahay, waxaana Hubka laga soo rarayaa Garoomada Balli-doogle iyo Nambar 50, maadaama garoonka caalamiga ah ee Muqdisho ee AMISOM gacanta ku heyso aan wax hub sharci daro ah laga dhoofin karin”ayuu yiri C/naasir Bedel Khalaf.
Ma jiro wax cadeyn ah oo uu soo bandhigay C/naasir Bedel Khlaf oo ku saabsan hubka uu sheegay in maamulka Galmudug doonayo inuu kala soo dego garoonka cusub ee uu ka sameystay koonfurta magaalada, haalkaasoo maamulka Galmudug ka taliyo.
Shirkadda Turkiga ah ee la wareegtay dekeda Muqdisho oo mooshin laga geeyey baarlamanka
Beesha degta degmada Ceeldheer oo ka hortimid qaabka loo dhisayo maamulka Gobolada Dhexe